Nin Xil Qaaday Eed QaadYour Everyday News
November 10, 2019 Booddaale News Opinions 0
Xil qabashadu waa dhib, cadow badana way kasabtaa. Saaxiibkaada maantana wuxuu noqon karaa cadowgaada berry.
Madax iyo culimo ganacsato ah xilka si sharicaga um ilaalin karaan
Madaxda iyo culimada haddii ay ganacsato noqdaan way adkaanaysaa in la kala saaro shaqadii qaranka iyo danihii ganacsiga. Sidaa awgeed waa in la diiwaan galiyo nooc walba oo hanta ah oo u leeyahay qofka xil ka qabanaya dalka si loogula xisaabtamo haddii uu boobo, dhaco, ama xado hantida guud.
Mucaaraka ujeedadiisu ma aha inay noqoto sidii kursiga looga qaadi lahaa qofka markaas xilka haya ee waa inay noqoto in ay la imaan karaan wax qabad ka wanaagsan kan xukuumadda markaas jirta. Mucaaradku waa inay shacabka ka dhaadhicin karaan program si dhab ah oo wax ka beddali kara nolosha, nabadda, dhaqaalaha, horumarka, midnimada, iyo qaranimada dalkooda iyo dadkooda.
Tusaale ahaan, mucaaradka hadda jira waxay mar walba ka hadlaan ciidamo dawaladuu dhisayso ama qorayso oo aysan iyagu ku qanacsanayn, laakiin mucaarad iyo muxaafidba waa inaan fahamnaa in dawlad aysan sii jiri karin ciidan la’aan, ciidankuna wuxuu u baahan yahay dhaqaale iyo hub uu ku difaaco dalka gudihiisa iyo xuduudihiisaba. Sidoo kale musuq-maasuq la’aan, iyo cadaadalad la’aan dawlad ma sii dhisnaan karto. Dawlad la’aana bur-bur baahsan oo dalka oo dhan ku habsada ka dhasha. Taasina waxay keenaysaa inaan jilicno cadowgeena, ha ahaado shisheeye ama sokeeye.
In xuquuqda ay isku leeyihiin dawaladda dhexe, maamul goboleedyadu, degmooying, iyo goballadu ay noqoto labo jihoolay ah, oo kor iyo hoosba u socon karta.
Godoomiyihii Barlamanka Puntland Oo Ka Xog Warrammay Xagga Laga Raacay…..